FTTH eriri optic anya, na-akpọ optic eriri onu nwere ọdụ ụgbọ mmiri abụọ, nke na-enye ohere ihe echichi nke otu ma ọ bụ abụọ eriri optic ihe nkwụnye, dabere na SC eriri ngwa anya ụdị.
The ODP-02M nwere metal ugwu maka udia patch eriri ma ọ bụ optic eriri USB, nke mmemmem na nwụnye usoro. Eriri optic cable ga-tightly ofu n'ime dobe waya anya.
FTTH faceplate na-mere nke ABS plastic. Ime ụlọ mgbidi-n'ịnyịnya ụdị echichi na-eme site 2 kpaliri kposara nke 25 4 size.
The akụkụ nke ọgwụgwụ onye ọrụ ngwa anya igbe bụ 86 * 86 22 bụ dum ezuru adabara eriri ụdọ ekwe okirikiri No splice tree chọrọ, ìhè na-amasị anya, nwere ike n'ibu nchebe.
Na-enye free ọrụ ohere ma ọ bụ data ohere dabeere FTTH technology
86 * 86 22
The ngwa anya eriri Gịnị, kwachie udọ ma ọ bụ pigtails Gịnị input na ngwa anya mgbidi tinyekwa na ala. Mgbe ahụ, USB na-eduga si ọgwụgwụ onye ọrụ imechi igbe na-arụsi ọrụ ike akụrụngwa.
Jera awade niile FTTH eriri optic nchupu igbe, na mkpa FTTH na PON ngwa: Fiber Optic Pigtails, Fiber Optic nkwụnye , Protection uwe, Fiber Optic Patch Ụdọ, Fiber Optic Splice mmechi, Idebe waya clamps, Down edu clamps, osisi brackets, osisi banding, Anchoring na Suspension clamps, cable slack nchekwa, wdg Anyị na-enye ọtụtụ dechara nso nke n'ezinụlọ ngwa anya network ngwa.
Previous: Eriri Optic Nkesa Box, 16 cores, FODB-16X
Osote: Suspension adịgide SGR
eriri optic anya
FTTH eriri optic anya
FTTH optic anya
optic nkesa sockets
optic eriri ebe
ngwa anya nkesa anya ODP-02